दशैंका बेला सर्वाधिक बज्ने गीतहरू कुन कुन हुन् ? « Nepal Bahas
दशैंका बेला सर्वाधिक बज्ने गीतहरू कुन कुन हुन् ?
प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०७८, मंगलवार १५:२२
२६ असोज, काठमाडौं । नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीलाई लक्षित गरेर धेरै गीत तयार भएका छन् । हरेक वर्ष दशैं अगाडि लक्षित गीतहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
महान पर्व विजयादशमी अर्थात् बडादशैंमा मालाश्री धुनले बेग्लै उत्साह थप्छ । रेडियो तथा टिभीमा घन्किने मालश्री धुनले नै दशैंको रौनक भित्र्याउँछ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । करिब चार सय वर्ष पुरानो मानिएको मालश्री धुनको पनि बेग्लै महत्व छ । यहाँ दसैं महसुस गराउने केही गीतसंगीतको चर्चा गरिँदैछ ।
नेपाली फिल्म ‘मुग्लान’मा समावेश ‘दशैं आयो’ गीतले घर आँगनमै दशैं भित्रिएको अनुभूत गराउँछ । लोकनाथ सापकोटाको शब्दको यो गीतमा उदितनारायण झा तथा दीपा झाले स्वर दिएका छन् । यसमा संगीत सुरेश अधिकारीको छ । रातो टीका, जमरा, पिङ खेल्दाको अनुभूति एवं घर-परिवारको खुसियाली समेटिएको गीतको भिडियो पनि उत्तिकै मार्मिक छ । यो गीत घन्किन थालेपछि दशैंको अनुभूति हुने गरेको छ । आजभन्दा १८ वर्ष अगाडि तयार भएको गीतले डिजिटल पुस्तामाझ पनि यस गीतको उत्तिकै वर्चश्व छ ।
स्वरसम्राट नारायणगोपालको स्वर रहेको ‘विछोडको पीडा’ पनि दशैंमा बज्ने गीतमध्येको एक हो । नारायणगोपालसँगै दिलमाया खातीले स्वर भरेको यस गीतले दशैंमा गाउँ फर्किरहेका युवाहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ । ‘विछोडको पीडा नसकी खप्न दशैंको बेलामा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु फर्की रमाइलो गाउँमा’ बोलको यो गीतले परदेशमा रहँदाको पीडा एवं घर फर्कने चाहनालाई उजागर गरेको छ । यो गीत ४० वर्षअघि रत्नशमशेर थापाले लेखेका थिए ।
दशैं-तिहारको उत्साह, उमंग र दुस्खलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यो गीतमध्येको एक हो सुगम पोखरेलको यो गीत । उनकै संगीत तथा स्वर रहेको गीतलाई रवि श्रेष्ठले लेखेका हुन् । परदेशीले घर-परिवारप्रति पोखेको वेदनासहितको यो गीतमा दशैंमा छोराको बाटो कुरिरहेका आमाबाबु मात्र होइन, तिहारमा माइतीको पर्खाइमा रहेका चेलीको भावनासमेत समेटिएको छ ।
दशैंको अर्को पाटोलाई कमेडी शैलीमा चित्रण गरिएको गीत हो यो ‘दसैं नै हो कि’ । योगेश्वर अमात्यले स्वर दिएको यो गीतमा दशैंको उत्साह उमंगसँगै आर्थिक व्ययभार थपिने यथार्थलाई समेटिएको छ । आयस्रोत कमजोर भएका मानिसहरूका लागि दशैं दशा बनेर आउने यथार्थलाई यो गीतमा उतारिएको छ ।
दशैंमा बज्ने गीतमध्ये ‘रातो टीका निधारमा’ मा सबैभन्दा अगाडि आउँछ । यसमा दशैंको उत्साहलाई चित्रण गरिएको छ । दुई दशक अगाडि अशोक शर्माले निर्देशन गरेको अल्लारे चलचित्रमा समावेश गीतमा राजेश हमाल र करिश्मा मानन्धरको नृत्य देख्न पाइन्छ । गीतलाई सहदेव ढुंगानाले लेखेका हुन् भने शम्भुजित बाँस्कोटाको संगीत छ । उमेश पाण्डे र रमना श्रेष्ठले स्वर दिएका छन् ।
मलिका महत : म्युजिक भिडियोमा हिट !
गायक चीज गुरुङको दशै गीत बजारमा
ओलीको दशैं, तिहार गीत र मिठासहरू
रचना र शंकरलालको ‘तिमी बिना मुटु दुख्छ’ सार्वजनिक